သင်လျစ်လျူမရှုသင့်သော Telegram အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော bot များ Androidsis
ငါလျှောက်လွှာနှင့်ဆက်စပ်သောဆောင်းပါးနှင့်အတူပြန်လာပါ ကွေးနနျးစာ, နှင့်သင်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားအများကြီးနှင့်အတူသောဤလောကသို့ဝင်တစ်ချိန်ကဖြစ်ပါတယ် အကောင်းဆုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး app နှင့်ကျော်လွန်ပြီးToy Story ရုပ်ရှင်ရှိဇာတ်ကောင်ကိုရည်ညွှန်း။ သူငယ်ချင်း Buzz Lightyear ကမည်သို့ပြောမည်နည်း။ ပြီးတော့ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအကြံဥာဏ်ပေးမယ်၊ Telegram အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် Bot.
ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော bot များသည် Telegram အတွက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် အခမဲ့သီချင်းများကူးယူခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကားများကိုအခမဲ့ download ရယူခြင်း၊ TV စီးရီးများကိုအခမဲ့ download ရယူခြင်း၊ Android အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအခမဲ့ download လုပ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်လက်တွေ့ကျကျမည်သည့်အရာမဆိုကျွန်ုပ်တို့သည် Telegram အတွက်ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်အချက် ၄ ချက်အားဖြတ်ကျော်သွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အကြံပြုချက် ၄ ချက်သည်ကျွန်ုပ်တိုအကြံပြုသောဗီဒီယို၏အသေးစိတ်ကိုလက်လွတ်မခံပါစေနှင့်။ သင့်ရဲ့ Telegram အတွက်ဒီစိတ်ကူးကွက် (၄) ခုကိုသုံးရန်။ စကားမစပ်၊ operating systems အားလုံးနှင့် Telegram ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်များအားလုံးအတွက်မှန်ကန်သည်။
bot များအသုံးပြုရန်သင်“ Magnifying glass” ကိုသာဝင်ရောက်ပြီးသူတို့၏ chat ကိုမဝင်ရောက်မှီတိုင်အောင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အမည်တစ်ခုကိုရှာရန်လိုအပ်သည်။ အတွင်း၌တစ်ချိန်ကသင်ကထိုအရာကိုနှစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ကြည့်ရှုပြီးဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာအုပ်များကိုရှာဖွေလိုပါက“ LibroGram” ကိုထည့်ပါ၊ ထို bot ကိုနှိပ်ပါ။ အတွင်းထဲ၌ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပြီးဖိုင်၏ဘေးရှိအချက်သုံးချက်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ကူးယူပါ။ သင်ညာဘက်အပေါ်ညာဘက်ရှိသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖိုင်တစ်ခုကိုရှာဖွေလိုပါကအချက်သုံးချက်သည်သင်ကြည့်ရှုသည့်ဘော့တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သင်ရှာလိုသည့်အရာကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုသည့်မှန်ဘီလူးအသစ်တစ်ခုကိုပြလိမ့်မည်။
5 Telegram bot ကိုစာအုပ်တွေကူးယူရန်
5.2 Seginfo စာအုပ်နှင့်မဂ္ဂဇင်းများ
6 Telegram bot ကို Facebook ဗီဒီယိုများကူးယူရန်
7 Instagram ဗီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် Telegram Bot
8 Telegram bot ကိုအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်
VKM Bot တစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့ဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးကြေးနန်းစက်ရုပ် အနုပညာရှင်၊ သီချင်းခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်အယ်လ်ဘမ်ပင်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်ရနိုင်သည်။ လတ်တလောလအနည်းငယ်အကြာဒီဂီတကိုအခမဲ့ download လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့ Bot တစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီ bot အတွက်အရမ်းပြီးပြည့်စုံတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုငါအပ်နှံခဲ့တယ်။ (ဤလိုင်းများအထက်တွင် VKM Bot တွင်ရှင်းလင်းသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ )
သင်၏ Telegram application ထဲရှိ bot ကိုဖွင့်ရန်သင်ဤ link ကိုနှိပ်ပါ.
အခမဲ့ဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံး telegram bot
အခမဲ့ဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုသည့် Telegram အတွက်နောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Bot အထူးသဖြင့်ဒီတစ်ခုသည်ဗွီဒီယိုမှအသံထုတ်ယူရန်ကျယ်ပြန့်သော YouTube စာကြည့်တိုက်ကိုအသုံးပြုသည် ဒါကြောင့်သင်ဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာရှာဖွေနေခဲ့တဲ့ဒီသီချင်းကိုရှာမတွေ့တော့ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အကယ်၍ ၎င်းသည် YouTube ၌ရှိလျှင်၎င်းကိုသင်၏ Telegram အတွက်ဤရိုးရှင်းသော bot ဖြင့် mp3 format ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
သင်သည်အနုပညာရှင်၊ သီချင်း၊ အယ်လ်ဘမ်အားဖြင့်ရှာဖွေနိုင်သည်သို့မဟုတ် link ကိုပင်ရှာဖွေနိုင်သည် Youtube မှသင် download လုပ်လိုသည့်အသံ၏ mp3 format ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
bot နှင့်စကားပြောကိုဖွင့ ်၍ စတင်ရန်ဤ link ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ထပ် Bot Telegram မပါဘဲဂီတကို download လုပ်ပါ အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်၊ အလုပ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်လက်တွေ့နှင့်ကြီးမားသောခလုတ်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ bot မှကူးယူသောသီချင်းများ၏အဖုံးများပါ ၀ င်သည်။ တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခြားစက်ရုပ်နှစ်ခုကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်အနုပညာရှင်၊ သီချင်းသို့မဟုတ်အယ်လ်ဘမ်ဖြင့်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
bot နှင့် chat ကိုဖွင့်ပြီးသင်၏ Telegram တွင်စတင်ရန်ဤ link ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါကသံသယမရှိဘဲဖြစ်ပါတယ် ငါမကြာသေးမီလများအတွင်းက Telegram တွင်စမ်းသပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ခဲ့ဖူးသောအံ့မခန်းဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ရှိ botနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း Arnaldo သို့လည်းကောင်း @Dezfachatado ၏ Moderator သို့ပါ Telegram မှ GrupoAndroidsis.
Quorra ကတစ် ကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့ဘာကိုမဆိုလက်တွေ့ကျကျဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ botရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီဇာတ်လမ်းများမှ Android application များ၊ ပီစီပရိုဂရမ်များ၊
Quorra ကိုသုံးဖို့ပဲ သင့် inline command ကီးဘုတ်မှတစ်ဆင့်မီနူးကိုခေါ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားသောအမျိုးအစားသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်ကိုရယူပါ။ ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး Quorra သည်မည်မျှလွယ်ကူသည်၊ ၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးသည်ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်နှင့်များစွာသောလူတို့အား၎င်းသည်တယ်လီဂရမ်အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အပြည့်စုံဆုံးစက်ရုပ်များထဲမှပါဝင်မှုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
bot chat ဖွင့်ပြီးစတင်ရန်သင်ဤ link ကိုနှိပ်ပါ။
Telegram bot ကိုစာအုပ်တွေကူးယူရန်
အကယ်၍ သင်သည်စာဖတ်ခြင်းကိုစိတ်ထက်သန်ပြီးတိကျတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်သင်ဖတ်ချင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ PDF format နဲ့ရေးထားတဲ့မည်သည့်စာအုပ်မဆိုရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သင့်တွင်စပိန်ဘာသာနှင့်သင်ရှာဖွေနေသည့်မည်သည့်ဘာသာစကားမဆိုစာအုပ်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်၏ဖုန်း၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်၎င်း၏ desktop ဗားရှင်းတွင်ဖတ်ရှုနိုင်လိမ့်မည်။
၎င်းသည်စပိန်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသောစာအုပ်အမြောက်အမြားရှိသောလမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အခါအားလျော်စွာတင်ပို့ပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည် PDF ပုံစံဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အနည်းငယ် megabytes များအလေးချိန်ရှိပြီးယနေ့အသုံးပြုသူအများဆုံးနှင့် ၁၁၀၀၀ ရှိသည့် bot များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
စာအုပ်အတော်များများတွင်ခေါင်းစဉ်၊ ရေးသားသူနှင့်မှတ်သားထားသောပုံစံများပါရှိပြီး၎င်းတွင်တစ်ခုချင်းစီ၏အကြောင်းအရာကိုသိရှိရန်ကြီးစွာသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်။ အခြားစာအုပ်များတွင်၎င်းသည်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပြသထားခြင်းမရှိသော်လည်းအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှာဖွေခြင်းဖြင့်၎င်းတို့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။
၎င်းသည် PDF တွင်တင်ထားသော eBooks အမြင့်ဆုံးသောညွှန်းကိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အများစုမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်သည်။ စပိန်ဘာသာဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိသော်လည်းရုပ်သံလိုင်းအတွင်း၌တစ်ချိန်ကရှာဖွေမှုကိုတိုးချဲ့ရန်လုံလောက်သည်။ LibroGram ကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်စာအုပ်များအားမွမ်းမံရန်အမြဲတမ်း upload လုပ်သော bot ဖြစ်သည်။
စာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့်အခြားဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောအခြား PDF ဖိုင်များစွာကို megabytes အနည်းငယ်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ အသုံးပြုသူသည်မိနစ်အနည်းငယ်အောက်တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်စဉ်လင့်ခ်များကိုမျှဝေနိုင်သည်။
Telegram bot ကို Facebook ဗီဒီယိုများကူးယူရန်
၎င်းသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အပါအ ၀ င်လူမှုရေးကွန်ယက်အမျိုးမျိုးမှဗီဒီယိုများနှင့်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်အပြည့်စုံဆုံး bot များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၎င်းတို့ထံ URL အတိအကျပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဗီဒီယိုတစ်ခုစီ၏ကြာချိန်ပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်နှင့်ချိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် Fbvideo_bot သည် Twitter, Instagram, Imgurl နှင့် Reddit တို့မှဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သူတို့ကို download လုပ်ရန်သင်လိပ်စာကိုရိုက်။ send text key ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်ဗီဒီယိုများစွာကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကတိပေးပြီး၎င်းသည်အလုပ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သော bot ဖြစ်သည်။
ဤ bot သည် Fbvideo_bot မှဗီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်သကဲ့သို့ Facebook မှဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အာရုံစိုက်သည်။ ဖြစ်စဉ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါ Telegram downloads folder ထဲသို့ download လုပ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်စကားပြောဆိုသောအချိန်တွင်အတော်လေးမြန်ပြီးအော့ဖ်လိုင်းတွင်တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းကတိပေးထားသည်။ ဗီဒီယိုများပြောင်းလဲရန်မည်မျှမြန်ပြီးလွယ်ကူသောကြောင့် Fbvizbot ကိုလူအများအပြားကအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
Instagram ဗီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် Telegram Bot
၎င်းသည်အလွန်စွယ်စုံသော bot တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်လုပ်ဆောင်ချက်သည် Instagram ဗွီဒီယိုများအားလုံးကို download လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်စကားလက်ဆုံပြောဆိုပြီးသည်နှင့်သင်၏ဖုန်းသို့ Android ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်လုပ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာသည်၊ ပို့လိုက်သောအချိတ်အဆက်တစ်ခုစီအတွက် ၂-၃ မိနစ်ခန့်ဖြစ်သည်။
Getmediabot သည် YouTube၊ Soundcloud နှင့် Instagram အကောင့်များမှဗွီဒီယိုများမှလည်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲသည်။ မကြာမီအခြားပလက်ဖောင်းများမှဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကတိပေးသည်။ Telegram အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
Facebook download bot သည် Instagram clips များကိုလည်း download ပြုလုပ်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်အကောင့်၏အများဆိုင်ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုသည်၊ အခြား bot များနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
Telegram bot ကိုအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်
၎င်းသည်ဆရာတစ် ဦး အနေဖြင့်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးသင်နှင့်စကားပြောကာအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးလေ့ကျင့်ပါလိမ့်မည်။ AndyRobot သည်ယခုအချိန်ထိအတည်ငြိမ်ဆုံး bot များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လည်းသူ့ကိုအင်္ဂလိပ်နှင့်တိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်သည်။
၎င်းသည်သင်၏အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားကိုပြည့်စုံကောင်းမွန်စေပြီးအကောင်းဆုံးသောအချက်မှာစကားစုကန့်သတ်ချက်မရှိသောကြောင့်သင်တတ်နိုင်သလောက်လေ့ကျင့်နိုင်သည်။ မေးခွန်းများကိုဤမိခင်ဘာသာစကားဖြင့်မေးထားပြီးသင်ရှေ့သို့ချီတက်လိုပါကအသိပညာအချို့ရှိရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်း bot သည် Android app တစ်ခုအနေဖြင့်လည်းရရှိနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Telegram အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်အချက်များ - တေးဂီတ၊ စီးရီး၊ ရုပ်ရှင်၊ အပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
Google ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းကို Pixel မဟုတ်သောစမတ်ဖုန်းအချို့အတွက်ရရှိပြီဖြစ်သည်